Calamka oo la yaaban Somaaliya Siday Wadamada Africa kaga horeyso dowlad wanaga – Radio Daljir
Agoosto 16, 2018 12:38 b 0
Wadamada afrika waxaa ka jira dawlado hanaankooda dawladnimo ay ku salaysantahay raadkii gumaysigii soomaray qaarada.Waxaa u noqday fure iyo wado la raaco nidaamyadii maamul ee waayo hore dunidu ku dhaqmaysay gaar ahaan reer yurubku. Qaababka kaligii talisnimo iyo nidaam aan furfurnayn ayaa gumaysigu uuga tagay afrika oo ay ilaa maanta ku dhaqmaan. waxaa nasiib dara ah in qaababkaa dunidu ka gudubtay oo xiliyo fog laga baxay.
Qaarada AASIYA ayaa iyana waxaa ka jira xukumado kaligii talis ah iyo nidaam maamul dawlo oo qadiim ah,oo aan u cuntamin in dunidan dadka hada nool lagu dhaqo. Waaxaa kaloo qada ku badan xukun iyo dawlad boqortooyo oo boqoro iska dhaxlaan dalkuna ahaado mid godoonsan oo siyaasadiisu xirantahay una xirantahay dad gaara oo ah reer boqor oo kaliya. Kolkaad daraasayso qaabka baarlamaanadoodu iyo xukuumadoodu ay u shaqayso ama u dhisan yihiin waxaad ogaanaysaa in xukun maroorsi baahsan jiro.
Dawlada soomaaliyeed oo hada jirta in kayar laba sanadood,ayaa soo jiidatay indhaha caalamka iyo dadka dunida oo leh aqoonta sare iyo caqliga wanaagsan. Waxaan shaki ku jirin lagana wada dharagsan yahay qaabkii dalka soomaaliya uu ahaa markay xilka la wareegeen.Waxay qabteen dal aan lahayn wax dhaqaale ah oo bangiga ku jira,waxay dhax leen khasanadii dawlada oo madhan!! waxay dhaxleen ciidan maleeshiyaad ah aan ka koobnayn soomaali oo dhan oo isku dhex jirta,waxay dhaxleen amaan daro iyo shaqala aan baahsan.
Waxaa lawada ogaa in ay meel ober ah wax ka bilaabeen.mudadaas yar waxay uugu horayn ku guulaysteen in ay amaankii wax ka qabtaan,si taa loo helana waxay la dagaalameen musuqmaasuqii tanoo keentay in lahelo mushahar lasiiyo si joogta ah ciidankii loo qoray in ay amaanka sugaan. waxay ku guulaysteen in ay dib u dhisaan anshixii iyo asluubtii ciidan lahaan jiray. waxay dhiseen noocyada dhamaan ciidamada sida booliis,malatari,nabadsugid iyo asluub, ciidankii cirka iyo ciidankii bada intaba. Waxaa soo baxay ciidan shacabkii soomaaliyeed aaminaan oo leh asluubtii ciidan dhawrayana sharciga.
Waxaa isu soo dhawaaday shacabkii iyo ciidankii oo yeeshay kalsooni iyo wada shaqayn.Caasimadii dalka soomaaliyeed waxay noqotay mid dib usoo noolaata oo soo kabata,dhan nabad iyo dhan ganaacsi iyo dhan dhismo dhanwalba waa soo kabatay waxbadan.
Dalkeena oo dunidu u aqoon sanayd halka uugu musuqmaasuqa badan,waxaa la arkay isbadal ah in la ilaaliyay hantida qaranka soomaaliyeed,in maanta dawladu cad yahay dakhligeedu oo loowada jeedo,in mushaharaadkii la bixiyo oo loo wada jeedo,in lacagi inoo taal bangiga oo loowada jeedo,in la ogyahay wixii baxay iyo wixii soo galay dawlada.
Dunidii waa rumaysan wayday,soomaalibaa sidan wax u maamuli oo kanaxaya dalkooda oo la dagaalami musuqmaasuqa waa loo qaadan waayay ilaa la arkay dhabta meesha taal. Arimahan waxay keentay in dawladii soomaaliyeed caalamka oo dhami xiiseeyo oo dul istaago oo wax laga qoro. waxaa dawlada soomaaliyeed mardhaw laga dhaafayaa daymihii kadib markii la arkay in ay yihiin maamul adag oo aamin ah aragtileh iyo furfurnaan dhaqaale. markii la arkay in ay rabaan hormar iyo dawladnimo ayaa aduunku hada la garabtaagan yahay hiil iyo wax wada qabsi.
Dawlada soomaaliya ee uu hogaaminaayo Madaxweyne Farmaajo iyo Raysal wasaare Khayre waxaa la arkay in aysan is khilaafayn waayo waa rag wadaniyiin ah oo u shaqaynaya danta dalka dadka iyo diinta. Hadii kolkaa dalka hormarkiisa loo adeegayo meesha mayaal wax lagu dagaalamaa. Waa geesiyaal aan taariikhda soomaaliyeed waligeed soomarin dhab ahaan,waajireen rag fiican laakiin wax gaari karaa majiro.
Madaxweyne Farmaajo iyo Raysal wasaare khayre,waxay sameeyeen waxaan laga aqoon afrika iyo AASIYA midna oo ah in ay ufakareen si sare oo keenaysa in dal ama qaran horumaro haduu qaato talaabadan,oo ah in ay ogolaadeen in lasameeyo khubaro dhaqaal yahan ah oo dalka ka talo bixisa qaabkii iyo sidii loo hormarin lahaa arimaha dhaqaalaha. hadaba waxay sameeyeen GOLAHA DHAQAALAHA QARANKA SOOMAALIYEED, golahan oo ah khubaro iyo rugcadaa dhaqaalyahan oo dunida laga yaqaan aqoon tooda iyo khibradooda. golahan kama mid ah dawlada waa gole madax banaan oo ah mufakariin xirfadleh oo tuujinaya maxkaxdooda kadibna talo iyo tilmaan siinaya dawlada soomaaliyeed.
Waa markii koobaad taariikhda soomaaliya la dhiso gole noocaan ah,waxaana iska leh sharafkan madaxda sare ee soomaaliyeed ee ogolaatay. halkan waxaad ka garanaysaa qiimaha Madaxweyne Farmaajo iyo Raysal wasaare KHayre oo ah in ay yihiin rag wadaniyiin ah oo ka run sheegay in ay u shaqeeyaan dalkooda dadkooda iyo diintoodaba waana mahad sanyihiin.
Waxaa golahani uu soo jiitay dunidii oo dhan waayo malaha hab dhaqan kan dawlado badan oo caalamka ka jiraa,waxaa la arkay soomaalidii oo khubarada caalamka u haysa shaqo ah cilmigaaga keen soomaaliya oo ku hormari adna qaado nolol fiican.Aduunyada maraykan kaa uugu badan dadka fahmay xili hore ilbaxnimadan oo waxa uu dalkiisa keenaa dadka aqoonta leh ee dunida si ay u hormariyaan wuuna ku guulaystay.
Wali majiro dal afrikaan ah oo sidan sameeyay soomaaliya ayaa u horaysa.dawlada soomaaliya waxay la timid xadaaro iyo aqoon iyo furfuraasho aan hore loo arag waxaana keenaya daacadnimada iyo kalsoonaanta ay isku qabaan.waxaa hubaal ah markaad eegto xawliga durba mudo yar dawladeenu ay ku gaartay hormar cad,oo la taaban karo in mudo aan fogayn soomaaliya hogaamin doonto dhaqaalaha afrika iyo carabta.
Waan ka hormaraynaa Kenya iyo Ethiopia soomaaliduna waa dad aad u qiimo badan oo waxay u dhaqaaqaan wax ka keeni kara markay helaan hogaan fiican sidan oo kale.Soomaalida cadaw baaa kala qaybiyay oo qabiil madaxa isugu galiyay waan ka xumahay waqtiga laynaga dhumiyay iyo dadkeenii aynu bilaash isaga laynay kuwaas oo dalka wax ka dhisi lahaa oo difaaci lahaa.
Hada soomaaliya oo soo kacday durba arag sida Kenaya iyo Ethiopia inooga baqayaan markay arkeen mogdisho oo nabad ah.dadka soomaaliyeed waxay ogaadeen cadawgooda,waxay ogaadeen qiimaha dawlad nimada waxay jecel yihiin dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. dadka soomaaliyeed waa hal isku diin isku diir isku af iyo isku isir isku dhul yeeli mayno kala qaybin ka timid cadaw iyo cadaw kalkaal,shabaab iyo shabaab kalkaal,dawlad diid iyo dawladiid kalkaal,xaraan quutayaal iyo xaraan quute kalkaal,qabiiliiste iyo qabiiliste kalkaal.
Dawlad daacad ah ayaan haysanaa walaahi iyo bilaahi iyo talaahi Madaxweyne Farmaajo runbuu inoo sheegay waana geesi,wadani ah oo daacad ah,wuxuu yiri “waxaan idiin soo doorayaa raysal wasaare aniga iga fiican.”
Waa aragnay taariikhdana nama soomarin Raysal wasaare ka qiimo badan,kashaqo badan,ka wadanisan ka geesisan ka caqli badan RAYSAL WASAARE KHAYRE. Madaxwayne aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waa aragnay oo rumaynay hadalkaagii xaqa ah ee runta ahaa.
Raysal wasaare khayre qabiil mayaqaan,waa nin qaran waana nin difaacaya dalkisa had iyo jeer umana ogala dalkiisa musuqmaasuq iyo amaan daro.waxaan kusoo koobayaa dawlad waa haysanaa soomaaliyeey cadawna waa leenahay soomaaliyeey aan xajisano dawlad nimadeena oo dalkeena u huro nafteena. illaahay aan ugu mahad celino nicmadiisa uu ina siiyay. Dalkeenu waa dalka aduunyada uugu quruxda badan dhan walba,nin walibana niyaduu ku hayaa in uu ku yimaad dalxiis ama ka eegto qaab kuu ku dagi lahaa si uu ugu raaxaysto nicmadaa illaahay dhigay soomaaliya. dalkeena aan illaashano dhisano ku noolaano ilmaheena dhaxalsiino soomaaliyeey.
Golaha dhaqaalaha qaranka.Raganimada soomaalida lama xaqiri karo.